Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) - Hello Sayarwon
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်)
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ကဘာလဲ။
ရေတိမ်ဆိုသည်မှာ အမြင်အာရုံကြော ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မျက်စိရောဂါဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းခြင်း၊ အမြင်ကွယ်
ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်စိတွင်းဖိအား များခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အမြင်အာရုံကြောသည် အာရုံကြောအမျှင်များစုထားသည့် အစုအစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမျက်ကြည်လွှာနှင့် ဦးနှောက်ကိုဆက်သွယ်ထား၏။ အမြင်အာရုံကြောပျက်စီးသည့်အခါ ဦးနှောက်ကိုပို့နေသည့်အမြင်အချက်အလက်များအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ရေတိမ်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ ထောင့်ပွင့်ရေတိမ်၊ ထောင့်ပိတ်ရေတိမ်၊ ပုံမှန်ဖိအားရှိရေတိမ်၊ ရောင်ခြယ်ရေတိမ်၊ မွေးရာပါ ရေတိမ်၊ တစ်ဆင့်ခံရေတိမ်တို့ ဖြစ်သည်။ အတွေ့ရများဆုံးသည် ထောင့်ပွင့်ရေတိမ်ဖြစ်သည်။
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရေတိမ်သည် တွေ့နေကျမျက်စိရောဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအသက် ၆၀ ကျော်များတွင် အတွေ့ရအများဆုံးဖြစ်သည်။ ရေတိမ်သည် အမြင်ကွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရေဂါလက္ခဏာများသည် ဖြစ်ပွားနေသောရေတိမ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် လက္ခဏာအချို့ဖြစ်၏။
• ထောင့်ပွင့်ရေတိမ် –
အစပိုင်းတွင် များသောအားဖြင့် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ လက္ခဏာများ ပေါ်လာသည့်အခါ ဘေးဖက်သို့ အလည်ဖက်တွင် အမြင်ကွယ်သည့်အပိုင်းများရှိနေနိုင်ပါသည်။
• ထောင့်ပိတ်ရေတိမ် –
လက္ခဏာများတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်စေ့နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း၊ အကွင်းများမြင်ရခြင်း၊ မျက်လုံးနီခြင်း
• မွေးရာပါရေတိမ် –
မွေးကင်းစကလေးများတွင် တွေ့ရပါသည်။ ကလေးမွေးပြီးတစ်နှစ်အတွင်းလက္ခဏာများကိုသတိထားမိနိုင်သည်။ ကလေးအထူးကူနှင့်မှန်မှန်ပြရန် အရေးကြီး၏။
• တစ်ဆင့်ခံရေတိမ် –
ဒီရေတိမ်အမျိုးအစားသည် အခြေခံရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက္ခဏာများသည် အထက်ပါရေတိမ်များနှင့် တူနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အထဲမှာ မပါဝင်သေးသော အခြားလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
ရေတိမ်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုရှိလာပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ မကုဘဲထားပါကအမြင်အာရချို့ယွင်းခြင်းနှင့် အမြင်ကွယ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အသက် ၄၀ အထက်အရွယ်များကိုရေတိမ်လက္ခဏာများရှိမရှိရှာဖွေရန် မျက်စိစမ်းသပ်မှုလုပ်ရန်လမ်းညွှန်ထားပါသည်။ ကိုယ့်အခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရေတိမ်ဖြစ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းသည် အမြင်အာရုံကြော ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် အမြင်အာရုံ ကြောသည် မျက်လုံးတွင်းဖိအားများမှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်လုံးတွင်းဖိအားများခြင်းသည် မျက်လုံးတွင်းအရည်များစုပုံလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အရည်များကို မျက်လုံးအောက်ခြေရှိ trabecular meshwork (အရည်စွန့်ထုတ်ပေးသည့် နေရာ)မှ စွန့်ထုတ်စေသည်။ အရည်စုပုံခြင်းသည် အရည်ထုတ်လုပ်မှုများခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ကောင်းကောင်း မစွန့်ထုတ်နိုင်
အကြောင်းရင်းသည် ရေတိမ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သေးသည်။ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
• ထောင့်ပွင့်ရေတိမ် – အတွေ့ရများဆုံးရေတိမ်ဖြစ်သည်။ ဒီအမျိုးအစားတွင် မျက်ကြည်လွှာနှင့် သူငယ်အိမ်ကြွက်သား(iris) တို့မှ ဖြစ်တည်နေသောအရည် စွန့်ထုတ်သည့်လမ်းကြောင်းထောင့်သည် ပွင့်နေပါသည်။ အကြောင်းရင်းကတော့trabecular meshwork တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အရည်များစုပုံလာပြီး မျက်လုံးဖိအားများလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီအခြင်းအရာသည် တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
• ထောင့်ပိတ်ရေတိမ် – ဒီအမျိုးအစားတွင် ပိတ်ဆို့မှုသည် အရည်စွန့်ထုတ်လမ်းကြောင်းထောင့် ပိတ်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် သူငယ်အိမ်ကြွက်သား ဖောင်းကြွခြင်းကြောင့် အရည်စွန့်ထုတ်မှု လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတတ်သလိုရုတ်တရက်လဲဖြစ်ပွားတတ်သည်။
• ပုံမှန်ဖိအားရှိရေတိမ် – မျက်လုံးတွင်းဖိအားသည် အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။ အမြင်အာရုံကြောသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးစီး ဆင်းမှုနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးတတ်သည်။ သွေးစီးဆင်းမှုနည်းခြင်းသည် အဆီများစုပုံခြင်း (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
• တစ်ဆင့်ခံရေတိမ် – ဒီအမျိုးအစားတွင် ရေတိမ်သည် အခြားသောရောဂါ သို့ ဆေးဝါးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချိုမထိန်းနိုင်ခြင်းသို့ သွေးတိုးမထိန်းနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေများကရေတိမ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်လိုဆေးများကလဲ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
• မွေးရာပါရေတိမ် – ကလေးမွေးကင်းစကတည်းက မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းမှုသည် မျက်စိတွင်းအရည် စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီးအမြင်အာရုံကြောကိုပိုပြီးထိခိုက်လွယ်စေနိုင်သည်။
• ရောင်ခြယ်ရေတိမ် – သူငယ်အိမ်ကြွက်သား (iris)မှ ရောင်ခြယ်အမှုန်များ စုပုံလာပြီး trabecular meshwork ရှိ အရည်စွန့် ထုတ်မှုကိုပိတ်စေသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
• အသက် ၆၀ ကျော်လျှင် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်စေပါသည်။
• ရေတိမ်ဖြစ်စေသည့်ဆေးဝါးများကို ကာလကြာရှည်သုံးစွဲခြင်း။ ထိုဆေးများတွင် ကော်တီကိုစတီးရွိုက် မျက်စဉ်းဆေးများပါသည်။
• ဆီးချို၊ နှလုံးပြဿနာ၊ သွေးတိုးနှင့် တံဇဉ်ဆဲလ်ရောဂါများရှိခြင်း
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက် ဆရာဝန်သည် အောက်ပါစမ်းသပ်ချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
• Tonometry – မျက်လုံးတွင်းဖိအားတိုင်းတာရန်စစ်ဆေးမှုတစ်ခု
• မြင်ကွင်းစမ်းသပ်မှုသည် အမြင်အာရုံပျက်နေသည့် အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်သည်။
• Pachymetry -မျက်ကြည်လွှာအထူကိုတိုင်းတာခြင်း
Glaucoma (မျက်စိ ရေတိမ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
• မျက်စဉ်း – ထိုဆေးများတွင် Prostaglandins (latanoprost, bimatoprost)၊ Beta-blocker (timolol, betaxolol)၊ alpha adrenergic agonists (apraclonidine, brimonidine)၊ carbonic anhydrase inhibitors (dorzolamide, brinzolamide) နဲ့miotic agents (pilocarpine) တို့ပါဝင်သည်။ ဒီဆေးများသည် မျက်လုံးတွင်းဖိအားကိုအဓိကလျော့ချပေးသည်။
• သောက်ဆေးများ – ဆရာဝန်သည် မျက်စဉ်းနှင့်အတူသောက်ဆေးများကိုပါတွဲပေးနိုင်သည်။ ဒီဆေးများတွင် carbonic anhydrase inhibitor ဖြစ်သော acetazolamide ပါဝင်ပါသည်။
• လေဆာtrabeculoplasty – အရည်များစွန့်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသော ကုထုံးဖြစ်သည်။ ဒီကုထုံးကို မျက်စိဆရာဝန်ဆေးခန်းတွင် အလွန်ပြင်းသည့် အလင်းတန်းဖြင့် ကုသခြင်းဖြစ်သည်။ လေဆာကို trabecular meshwork ကိုချိန်ထိုးပြီး အရည်စွန့်ထုတ် လမ်းကြောင်းကို ပွင့်သွားစေပါသည်။
• Trabeculectomy – ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုကိုတခြားကုထုံးများနှင့်အဆင်မပြေတော့သည့်အခါ အကြံပြုလေ့ရှိပါသည်။ ခွဲစိတ်နေစဉ်တွင် ဆရာဝန်သည် အရည်စွန့်ထုတ်ရန်အပေါက်သစ်များကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှုကိုတစ်ခါလျှင်မျက်လုံးတစ်လုံးကိုသာ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဒုတိယမျက်လုံးအားခွဲစိတ်ရန် များသောအားဖြင့် ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်ထိအချိန်ယူရပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရေတိမ်ကို ကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်
အောင်နေသော နေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
• စမ်းသပ်မှုများကိုမှန်မှန်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်နာခြင်း
• ဆေးများသောက်နေတာရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ
• တခြားရောဂါများ (ပန်းနာရင်ကျပ်၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ) သို့မဟုတ် ရေတိမ်ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ
• မျက်လုံးထိခိုက်မှုကိုရှောင်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လျှင် အကာအကွယ်မျက်မှန်များအမြဲတပ်ပါ
• လက္ခဏာများပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ
edition. Page 721
health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page 1448
20024042. Accessed Jul 14 2016
Glaucoma. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001620.htm. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print
Glaucoma. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001620.htm. Accessed Jul 14 2016